သာလွန်ဇောင်းထက်| February 18, 2013 | Hits:20,156
နိုင်ငံခြားသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့မည်မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလားအာဆီယံ၏ အားနည်းချက်က တရုတ်အတွက် အားသာချက် ဖြစ်နေအင်းကြီး တောင်သမန်ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ် လက်မခံ၍ ဟောင်ကောင်သားများ ဆန္ဒပြ
ရာဇာ February 18, 2013 - 7:51 pm အရေးယူမဲ့ အဖွဲ့ထဲ မှာ ဦးအောင်မင်း များပါသေးလား ? တော်ကြာ အိမ်ဝင်မစစ်ခင် အိမ်ဝက ဦးချပြီး မှဝင်စစ်ပါ ဖြစ်နေအုံးမယ်….
Reply Mr. ABC February 18, 2013 - 7:59 pm those chinese came in Myanmar .. with collaboration and abuse power of Khin Nyunt Go and ask Khin Nyunt. I am not joking . It is truth.
Reply Sandra Lin February 18, 2013 - 8:21 pm Chinese are very entrepreneurial and they are exactly the kind of peoples our country needs now. Ne Win kicked out both Chinese and Indians entrepreneurs 50 yeards ago and many Burmese thought that they would become rich as the greedy foreigners left. Do I have to remind anyone what was the result of that action? We need more business minded peoples regardless of their race or ethnicity.
Reply ချစ်သခင် February 18, 2013 - 8:37 pm ဒီအရေးကိစတကယ်ကောလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမှာလား။ ဒီအရေးတိတိကျကျလုပ်ဆောင်လိုက်လျှင် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေ အထိကယက်ရိုက်ခတ်သွားနိုင်တယ်နော်။ တရားမ၀င်နေထိုင်သောတရုတ်လူမျိုး၊ နှစ်ပေါင်း(၃၀)ခန့်နေထိုင်ပြီးသော တရုတ်လူမျိုးစသဖြင့်လည်း ခွဲခြားထားသင့်တယ်နော်။ ဒီအရေး အားလုံးသို့ကယက်မရိုက်စေချင်ရင်တော့ သိပ်လည်းတိကျအောင်မလုပ်ဖွဲ့နှင့်ပေါ့။ လုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့လည်း ၀င်ငွေ ရအောင် လုပ်ရုံဘဲရှိတယ်
Reply lwinthant February 18, 2013 - 10:45 pm should be done long time ago.Even should not allowed the any shop with chinese signboard. Should be the signboard with Myamar,Chin,Kachin,Karen,Shan,Mon,rakhine and Kayar.Historical Myanmar capital should not be disappear under the chinese.That is depending on the present Government.
Reply kozay February 18, 2013 - 11:15 pm သူတို.လဲ ဦးနေ၀င်းလို နိူင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လို.နေမှာပေါ.ဗျာ….ဦးနေ၀င်းဆိုတာကလည်း ယူနန်တရုတ်စစ်စစ်ပဲ
Reply zartithawye February 18, 2013 - 11:51 pm တရားမ၀င်နေထိုင်သူများကိုသက်ဆိုင်ရာကဖေါ်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်ဆိုတာသိရလို့ဝမ်း
Reply ayer February 20, 2013 - 9:43 pm မူဆယ် လဝက ကို စစ်တိုက်ခိုင်း ဖို့ အကုန်လုံး ဖမ်းပြီး ရှေ့တန်းပို့ပါ။ ၂၀၁၃ မကူးခင် ကို လဝကကို အကုန်ဖြုတ်ရ ပါမယ်။ အမွဲဆုံး လဝကကို ပြန်ခန့်ပါ ။လဝက မျိုးဆက် ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ မူဆယ်လဝက ကို ဘယ်ဝန်ကြီး ဘယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဘယ်တိုင်းမှုး မှ မလာကြည့်ဘူး လား။
Reply Sunshine February 19, 2013 - 5:45 am Is itanew thing? Many Chinese who live in Mandalay bought Burmese citizenship cards as low as $ 300apiece from corrupt Immigration Officials. They hold both Chinese citizensip and Burmese citizenship. They cross the border anytime they want to. When they are China, they live peacefully. When they live in Burma, they live peacefully. It sounds great. But it is not supposed to be. Burma had been sold and betrayed by corrupt immigration officials. It happened since Khin Nyunt’s time. Khin Nyunt himself has Chinese blood and he may be the source of this incident. It is treason indeed. The reason why many Chinese who speak little Burmese live in Mandalay has reason which is because of corruption inside Burmese military junta. Bengali people are poor but Chinese have money. Illegal Chinese immigrants live peacefully but Bengali people have much problems to deal with concerning their legal status.
Reply Khin Maung Yin February 19, 2013 - 8:16 am မန္တလေးမြို့ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံက ရန်ကုန်က ၁၉ လမ်းကြီး -_-
Reply Margathagyar February 19, 2013 - 1:19 pm Top authorities are afraid of china,Muslim , so and so.Myanmar is sovereign country.we have law.If we do according to the law we no need to afraid of anybody.
Reply AKN February 19, 2013 - 3:47 pm This Chinese immigrants case should be handled very carefully.
Reply Maung Maung February 19, 2013 - 3:51 pm တရုတ်ဆို ဘာတရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ၀တရုတ် ကိုးကန့်တရုတ် မုန်ဝီးတရုတ် တရုတ်စပ်တာနဲ့ ချက်ခြင်းတန်းစစ်လိုက်ပါ။ရှေ့ကိုးဆက် အထိလိုက်ဖို့လိုပါမယ်။အမှန်တော့ မြေးမြစ်တီတွတ်ကျွတ်အထိနိုင်ငံသားမပေးသင့်ပါ။ထိုအထဲတွင်ကုလားများပါစစ်ဖို့လိုပါမည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုလားများ၏အသားအရေသည် ဗမာများနှင့်တူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ကုလားသွေးပါလျက် ဗမာဟုနာမည်ခံထားသူများအများအပြားရှိပါသည်။ ဇာတိသွေးကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ထိုအတူ ထိုင်းဖြစ်လျက် ရှမ်းဟုဆိုထားသူများလည်းရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်ရဲ့လူဝင်မှုဥပဒေကို ပိုမိုတင်းကြပ်သင့်ပါသည်။မည်မျှပင် ဗမာနိုင်ငံသားဟု ဆိုစေကာမူ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ တရုတ်ကုလားသွေးပါသောသူများကို နိုင်ငံသားအဖြစ်မပေးသင့်ပါ။ဧည့်နိုင်ငံသား ပြုနိုင်ငံသားများသာ ပေးသင့်ပါသည်။ စိစစ်လေ ရှာဖွေလေ စူးစမ်းလေ တွေ့ရှိလေဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုလားအလိုမရှိ၊ တရုတ်ကုလား ဗမာပြည်ကထွက်ထွက် လူမျိုးခြားယူသူများ အလိုမရှိ။ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်ပြကြ မာန်ဖီကြ။
Reply maung Ko ko February 19, 2013 - 3:55 pm လုပ်ပြလေးတော့ မလုပ်နှင့်
Reply minko February 19, 2013 - 4:01 pm ဒီကိစ္စက ဖြစ်သင့်တာကြာပြီ-အရေးယူရင် -အရင်အစိုးရ မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကို အရေးယူရမှာ-ဒါတွေကိုသိလို့စစ်အစိုးရ ရေးတဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာ -စစ်အစိုးရလက်ထက်( န-၀-တ)(န-အ-ဖ)ခေတ်က လုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံးတရားဝင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့- တကယ်ရော အရေးယူရဲမှာလား-မြက်ရှောဖြစ်သွားဦးမယ်။
Reply lwinthant February 19, 2013 - 10:05 pm The problem is how to protect myamar language and natives’ languages not to disappear. Should allowed the chinese shops with chinese letter sign board.
Reply Saya Hman Gyee February 20, 2013 - 4:53 pm For manyChinese Foreigners have invaded to Burma,and now,Mandalay,Maymyo,Taunggyi,Lashio,and many places are,full with them.Due to Immigration slogans,”Earthquake cannot killed Race,Only Human Invaders can be swallow by Race.”Due to that word,many people accept and widely propaganda and encouraged by the today “Burmese Racists” slogans,we are fighting,killing and shouting to those Bangali,from Rakhine. But,about Foreigners Chinese have been migate illiegally and have already occupied the above area,WHY? =These Racist keeps silent? they may think that those Chinese are Buddhist,no, mostly,they worshipped money,they do what ever they ‘ll get for money,and they are confucius,communists,and free thinkers,not as many Buddhist thinks,some are worshipper of their so called “Tayote Nuts”,believers.Did you know that???
Reply လုလု February 21, 2013 - 1:19 am မင်းတို့ ဗမာရောင်းလို့ ငါတိုဝယ်တာ
Reply လုလု February 21, 2013 - 1:20 am မူဆယ်မှာလာကြည့်ဦး
Reply နေနေ February 21, 2013 - 1:24 am ဒါ ဗမာအကျင့်ပဲး
Reply ukyawt February 21, 2013 - 1:24 pm in yangon too,we find them as the phone shops’ owners.we want to check them.it is not enough as the news of them.some owners in the mobile phone shops,we easily can see in tamwe township.do or act really,we will wait and see..
Reply မြန်မာပြည်သား February 23, 2013 - 10:44 pm တရုတ် များ မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာ ခဲ့သည်မှာ တော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဒေသ များတွင် မြန်မာဘက်မှ သေဆုံးသူ မရှိပဲ တရုတ် ဘက်တွင် သေဆုံးသူ များနေသည်မှာ တော်တော် ကြာနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Reply sai hla kyaw February 24, 2013 - 3:22 pm orgအဲဒီကိစ္စလွယ်ပorgအဲဒီကိစ္စလွယ်ပမလားတရုတ်ကဉာန်များ:-) Reply ဌေးဝင်း March 29, 2013 - 8:35 pm လုပ်မနေပါနဲ့…လူကြားကောင်းအောင်….၀န်ကြီးကအစ….လ၀ကဒရိုင်ဘာအထိ..အားလုံးဗိုက်ပါတဲ့လူချည်ဘဲ။သဘောပေါက်ပါတယ်နော်…ရှင်းမပြတော့ဘူး။
Reply Anawyahtar April 11, 2013 - 8:06 pm can be china town to china state we must be careful……